Orkide ao amin'ny rafitra mihidy: inona ireo karazana fambolena, fambolena, fiahiana, hafiriana no mety hipetrahan'ny maso ary azafady, inona no fantatra momba ny fanitsiana azy ireo? - Famokarana voankazo - 2019
Fomba fikarakarana orkide ao anatin'ny rafitra mihidy sy toromarika amin'ny antsipiriany amin'ny fambolena voninkazo toy izany
Noforonina ny rafitra fambolena orkide tsy misy hatak'andro vao haingana ary ny mpamboly voninkazo avy hatrany dia mizara roa ao amin'ny toby roa - ho an'ireo izay nankafy ny rafitra ary, mifanohitra amin'izay, ho an'ny mpanohitra mahery setra amin'izany. Matetika ny voninkazo no mitombo ao anaty vilany iray, izay misy lavaka fisotron-dronono izay mikarakara ny rano sy ny rivotra. Ary ny singa fototra amin'ny rafitra mihidy dia ny mamolavola orkide iray ao anaty fitoeran-drano tsy misy lavaka. Rano ny rano.
Hafiriana no mety hitombo?
Toro-dàlana amin'ny dingana fitsangatsanganana
Ny olana sy ny olana
Satria ny rano dia eo amin'ny faran'ny fitoeran-drano, ny fakan'ny zavamaniry amin'ny fotoana rehetra mba hahazoana fahamendrehana, izany hoe, midina. Ny fototarazo dia mivoatra tsara, mifoha amin'ny fakany ny fakan-ketaheta, ary izany dia mandray anjara amin'ny fivoarana haingana sy ny fitomboan'ny ravina, tongolobe. Ny mety hampidi-doza ny ampahany amin'ny fakany dia mihena hatramin'ny kely indrindra, satria avo ny hamandoana ao amin'ny vilany. Ny rano dia tsy hamela ny tara-pahazavana hipoitra, izay napetraka eo an-tampony.
Mitahiry ny fotoana. Tsy mila fanazavana be loatra ny orkide ary ho mora ny hikarakarana izany, ny hany zavatra ilainao dia ny manampy rano indray mandeha isam-bolana.
Afaka mamerina avy hatrany ny voninkazo efa-may ianao. Matetika, amin'ny fivarotana dia misy orkide efa misy fakom-bary mipoaka, tsy misy ravina, ary maro no mihevitra fa tsy misy fanantenana toy izany ny zavamaniry, saingy tsy izany. Ny fambolena ao anaty rafitra mihidy, mamelona indray, miverina indray ny fakany, ary mandroso ny orkide rehefa mandeha ny fotoana.
Ravina maitso sy voninkazo be dia be.
Raha maina ny toetr'andro, dia tsara io fomba fambolena io.
Ny fakany dia voaro amin'ny rot. Ny totozy matevina dia manana fanjifa mahery sy antibakterika.
Mety hisy ny fahaverezan'ny teboka na ny fototarazo.
Matetika ny bibikely manintona bibikely.
Tsy azo alefa any amin'ny rafitra mihidy ny zavamaniry manjavozavo loatra.
Tsy azo ampiasaina any amin'ny toeram-ponenana mando.
Mety misy algoma maitso eo amin'ny rindrin'ny fitoeran-drano.
Manasa antsika hijery lahatsary iray momba ny fiantraikan'ny orinasa mihamitombo ny orkide:
Ireo mpamboly voninkazo izay manaraka ny fomba fambolena nentim-paharazana dia milaza fa azo ampiasaina mandritra ny fotoana voafetra ny fomba fisakanana. Na izany aza, ireo mpanohana an'ity rafitra ity dia mitaky ny mifanohitra amin'izany. Raha manaraka ny fitsipika rehetra ianao ary mihazona fikarakarana tsara, ny orkide dia hitazona ny fahasalamany ary hiaina mandritra ny taona maro.
Ny vata fitaratra tsara indrindra. Miorina mafy kokoa noho ny plastika izy io ary mijery kokoa ny aesthetic.
Ny glass dia tsy manana rafitra marefo, ary izany dia hisoroka ny fidiran'ny rhizomes. Ny endriky ny vilany dia azo alaina, afa-tsy ny boriborintany, satria rehefa tsy afaka manongotra tsara ny famindrana dia tsy manimba ny orkide. Ny ankizy dia azo ambolena ao anaty solomaso, solomaso, zavatra izay mianjera eo ambany sandry. Ary ny zavamaniry ho an'ny olon-dehibe dia mila fahaiza-manao goavana: vazy marolafy na lakolosy kely.
Zava-dehibe izany! Tokony ho mangarahara ny sambo, satria mora kokoa ny manara-maso ny haavon'ny rano ary mitandrina izay mitranga ao anatiny.
Ny tany tadiavina mba hijanona amin'ny lalana mihidy dia ahitana singa mihoatra ny iray. Tsy afaka mifangaro ianao Ny fametrahana dia miteraka afisy:
boka na bodofotsy ho an'ny orkide;
Ny singa rehetra dia azo vidiana amin'ny fivarotana voninkazo, ary ny sokatra sy ny moss dia afaka mivondrona tsy miankina amin'ny ala, raha azo atao. Mba hisorohana ny famolavolana baolina, ary ny fahafaham-baratra malalaka dia tsy maintsy ilaina. Ny moka Sphagnum dia mila fiainana, izay misy tsimokaretina maitso, aorian'ny fotoana mivoatra ny moss.
Ny votoatiny dia alefa avy ao anaty fonosana mivantana avy ao anaty fonosana, na dia tsy misy mirakotra na voaaro. Ny zavatra tokana tokony hatao dia ny manasa tsara ny vilany mba hambolena azy, alohan'ny hanaovana izany, mba hananganana ny lelany, izay hanala ny fako sy ny maty, raha misy izany.
Ao amin'ny ambany dia mametraka clayite 3-5 santimetatra matevina.
Manaraka, ny saron'ny moss, eo amin'ny 1-2 santimetatra ny sakany.
Ny dingana fahatelo dia kohaka mifangaro amin'ny arina.
Ankehitriny isika dia mamaritra ny fototry ny voninkazo ary mametraka izany ao anaty fitoeran-drano. Ny tendany dia tsy tokony hiditra lalina ao anaty valizy, ny toerany eo ambony.
Ny vilany dia feno ny hodi-kazo miaraka amin'ny hodi-kazo mba hipetrahan'ny orkide tsara ary tsy mitongilana.
Moss napetraka ambony. Hanampy hiaro ny fahamendrehana.
Ary avy eo dia feno rano avokoa izany rehetra izany, ary 30 minitra taty aoriana dia mandevona, saingy tsy tanteraka. Ny haavon'ny tanimanga manitatra dia tokony hosaronana rano.
Amin'izany fomba fanao izany dia vita Vita fotsiny ny fametrahana ny voninkazo amin'ny toerana mety aminy, izay hahamora ny hafanana sy ny jiro.
Manasa antsika hijery lahatsary momba ny fambolena orkide anaty rafitra mihidy:
Sambo lehibe sy lalina loatra - ny olana malaza indrindra amin'ny florist. Ny voninkazo ao anaty vilany toy izany dia ho maina, satria ny rano dia lavitra ny rano. Famaranana - tsy ilaina ny maka vilany ho an'ny fitomboana.
Ny fivoahana hafa dia mamolaka. Hanjavona irery izy io, hitranga izany rehefa mihamitombo ny zavamaniry ary manomboka mivoatra mavitrika.
Ny tany moka dia tian'ny moana. Ilainao ny mamantatra ny karazana bibikely, ny loza aterany, ary avy eo dia misafidy ny fomba mety amin'ny ady.
Ny vanim-potoana fanamafisana dia miankina amin'ny fiantraikany eo amin'ny rafitra fototra. Miaraka amin'ny fomba amam-panao radika, manapaka karazana maty maro, dia mety hitarika izany. Ilaina ny manaraka ny torohevitra vitsivitsy mba tsy hitrangan'izany: ny fanondranana dia tsy natao afa-tsy amin'ny fotoan'ny fitomboana mavitrika, tsy omena sakafo avy hatrany.
Rehefa manamboatra, ny voninkazo indraindray dia manalefaka ny raviny, na mandatsaka ny voninkazo, ary tsy misy zavatra tsy voajanahary momba izany - fanehoan-kevitra manomboka amin'ny fepetra vaovao, ny fanekena azy ireo.
Top dressing. Ny fangirifiriana dia ampiharina aorian'ny nanombohan'ny fambolena dia nitombo ary niorim-paka. Tsy mila manao akanjo maromaro ny orkide. Indraindray kely monja amin'ny zavatra voalaza ao amin'ny fonosana.
Fisotroan. Tsy ilaina ny manondraka sy manondraka. Raha mbola hita eo amin'ny rindrin'ny vilany ny fivalanana, dia tsy ilaina ny voamadinika fanampiny. Ny rano dia toy izao manaraka izao: ny rano dia harotsan'ny renirano, mandra-pahatapitry ny tanimanga misy tanimanga manitatra. Io fitahirizana io dia voatazona foana.
Tsy mampaninona ny fambolena, ny nentim-paharazana na amin'ny rafitra mihidy, ny tena zava-dehibe dia ny hanaraka ny fitsipika sy ny fanolorana rehetra amin'ny fanondranana, ary koa ny mitandrina ny fepetra tsara indrindra ho an'ny orkide.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Fomba fikarakarana orkide ao anatin'ny rafitra mihidy sy toromarika amin'ny antsipiriany amin'ny fambolena voninkazo toy izany